ပို၍လုံခြုံသော ရိုးရှင်းသည့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် ၇ ခု – Shwehealth.com
6. စကျတငျဘာ 2016 6. စကျတငျဘာ 2016
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နေထိုင်မှုပုံစံများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနေပြီး အထူး သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အပြောင်းအလဲများစွာ ဖြစ်နေသည်။ အနောက်တိုင်း နေထိုင်မှုပုံစံများ လွှမ်းမိုးလာမှုကြောင့် လတ်တလောဆယ်စုနှစ်များအတွင်း၌ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုသည် များစွာပြောင်းလဲ လာသည်။ လက်မထပ်မီ လိင်ဆက်ဆံမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုနောက်ပိုင်း၌ အလွန်လူကြိုက်များ သော အပြုအမူ တစ်ခုဖြစ်လာသည့်အပြင် ယင်းအားချစ်သူစုံတွဲများ၏ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ကိစ္စတစ်ခုအ ဖြစ် သတ်မှတ်လာကြသည်။ ချစ်သူများနေ့ကဲ့သို့သောနေ့များတွင် ဟိုတယ်အခန်းများသည် လက်မ ထပ်ရသေးသော လူငယ်စုံတွဲများဖြင့် ပြည့်နေလေ့ရှိသည်။ ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းအရသာ လွှမ်းမိုးမှုရှိသော် လည်း ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် လူငယ်များအတွက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာသည်ကား အလွန်နိမ့် ပါးနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အသိပညာသင်ကြားမှုမျိုးမှာလည်း ကျောင်းပညာရေးတွင် ပါဝင်မှု မရှိ သေးပေ။ သို့ဖြစ်ရာ လူတိုင်း အထူးသဖြင့် လူငယ်များသည် ဘေးကင်းသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအ မူများ သိရှိထားရန် အလွန်ပင် အရေးကြီးလာပြီ ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ရိုးရှင်းသော လမ်းညွှန် ချက်အချို့အား ဖော်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းသည် လူသိများပြီးသော အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ဒုံးတစ်ခုအား မည်သို့မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲရမည်ကို လူတိုင်းသိသင့်သည်။ ကွန်ဒုံးတစ်ခုအား မှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများ စွာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မရည်ရွယ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းနှင့် လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများအား ရှောင်ကျဉ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကွန်ဒုံး ကို အလွယ်တကူ ဝယ်၍ရနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ဆေးဆိုင်များမှအစ အချို့သော ကွမ်းယာဆိုင်များအဆုံး ရရှိ နိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းသော အရာကို ဝယ်ယူရန်နှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို စစ်ဆေး ရန်လည်း မမေ့သင့်ပေ။
၂။ လိင်ဆက်ဆံဖက်များစွာ မထားပါနှင့်
လိင်ဆက်ဆံဖက်များစွာ ထားရှိခြင်းသည် မလုံခြုံသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများအ နက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းသည် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ ရရှိနိုင်ချေကို များစေ မည်ဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံဖက်များလေ အန္တရာယ်များလေပင်ဖြစ်သည်။ လတ်တလောတွင် မြန်မာ နိုင်ငံ၌ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်အား ကျင့်သုံးရန် ဥပဒေပြဌာန်းလိုက်ပြီဖြစ်ရာ ယင်းသည် စုံတွဲများအ တွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ပုံမှန်ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများကို ခံယူပါ
လိင်ဆက်ဆံဖက်နှစ်ဦးစလုံးအား ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်သင့်သည်။ အချို့သော ရောဂါများဖြစ်ကြသည့် အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ၊ အသားရောင် အ သားဝါ စီ စသည်တို့သည် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်နိုင်သည်။ ယင်းတို့သည် လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများစာရင်းတွင် မပါဝင်သော်လည်း လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့် ကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများအား ပုံမှန်ခံယူခြင်းသည်လည်း ပို၍ ဘေးကင်းသော လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက် အရေးကြီးသော အချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
၄။ သဘာဝအတိုင်း ကျင့်သုံးခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်များသည် အရာရာတိုင်းအတွက် အထူးသဖြင့် လိင်ဆက်ဆံမှုများအ တွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေပြီးသား ဖြစ်သည်။ ပြောရလျှင် သဘာဝအတိုင်း ပြုလုပ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးသော ဘေးကင်းသည် လိင်ဆက်ဆံမှု နည်းလမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ သဘာဝကို ကျော် လွန်သော မည်သည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုမဆိုသည် အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ စအိုဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများသုံးကာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့သည် ဥပမာပြစရာများ ဖြစ်ကြ သည်။ သဘာဝအားဖြင့် စအိုသည် လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက် မဟုတ်သကဲ့သို့ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ရုံသာမက အခြားသော ပြဿနာများကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာသုံး၍ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လည်း ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ် စေနိုင်သည့် ဘေးမကင်းသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ သဘာဝအတိုင်း နေထိုင်ခြင်းသည်သာလျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
၅။ သင့်လိင်အင်္ဂါအား ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းနှင့် အခြေအနေများအား စစ်ဆေးခြင်း
တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုသည် ပို၍ဘေးကင်းသော လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက် နောက်ထပ်အရေး ကြီးသော အချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ သင့်လိင်အင်္ဂါတွင် အနာများ၊ အရည်ဆင်းမှုများ၊ ယားယံမှု၊ အနံ့ ဆိုးထွက်ခြင်းနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော တစုံတရာဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့အား ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ပုံမှန် မဟုတ်သော တစုံတရာကို တွေ့ရှိရပါက ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ဆေးကု သမှုအား အမြန်ဆုံးခံယူပါ။ ကြွက်နို့နှင့် HPV ကဲ့သို့သော ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါများသည် လိင်အင်္ဂါ ကြွက်နို့ရောဂါအား ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ယင်းသည် အရေပြားချင်း ထိတွေ့မှုမှတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါသည်။
၆။ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်လည်း အကာအကွယ်နည်းလမ်းများသုံးရန် စဉ်းစားပါ
အချို့သော ရောဂါများနှင့် ကူးစက်မှုများသည် အရေပြားတွင် ပေါက်ပြဲမှုရှိလျှင် သို့မဟုတ် ထိ တွေ့သော အစိတ်အပိုင်းများမှတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ အသည်းရောင်အသားဝါ အေကဲ့သို့သော ကြိတင်ကာကွယ်ဆေးထိုး၍ ရနိုင်သည့် ရောဂါများသည် ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် ကူးစက် နိုင်ပါသည်။ ကျားအင်္ဂါပေါ်တွင် ကွန်ဒုံးစွပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မအင်္ဂါပေါ်သို့မဟုတ် စအိုပေါ်တွင် oral dam ဟုခေါ်သော အကာအကွယ် အသုံးပြုခြင်းများအား ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ် ရန်အတွက် ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုမီ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
၇။ အသုံးပြုသော ချောဆီကို သတိပြုပါ
တခါတရံတွင် သင်သည် လိင်ဆက်ဆံရာတွင် ချောဆီကို အသုံးပြုလိုမည်ဖြစ်သည်။ အကယ် ၍ သင်သည် ကွန်ဒုံးတစ်ခုအား အသုံးပြုပါက ဆီကို အခြေခံသော ချောဆီများအား အသုံးပြုခြင်းသည် သင့်ကွန်ဒုံးအား ပျော်ကျစေနိုင်ပြီး ယင်း၏ အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှုကို ပျက်စီးစေ သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကွန်ဒုံးတစ်ခုအား အသုံးပြုချိန်တွင် ရေကိုအခြေခံသော ချောဆီမျိုးကိုသာ အသုံးပြု သင့်ပါသည်။
အသုံးဝင်သော links များ (1) (2)